အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပညာသင်မြန်မာရဟန်းတော်များသာယာဖွံဖြိုးရေးအဖွဲ့ ဧကာဒသမနှစ်လည်ဗဟို အလုပ် အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ ပထမလေးလပတ်အစည်းဝေးတက်ရောက်ရန် ဗာရာဏသီမှ ဗုဒ္ဓဂယာသို့ သွားကြ မည်။
နံနက် ၁၀း၀၀ တွင် တိဘက်တက္ကသိုလ်ပရိဝုဏ်ထဲသို့ ၀င်လိုက်သည်။ ရုံးခန်းတွင် ၀င်၍ လက်မှတ်ထိုး၏။ တက္ကသိုလ် ကမလ်ရှီလ် ခန်းမကြီးတွင် ကျောင်းသူကျောင်းသားများ စာမေးပွဲဖြေနေကြသည်။ အခန်းစောင့်ကျနေသော အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာမ ဒေါက်တာ ဘနာဂျီးက သူ၏ “နမစတေး“ ဟု ဟင်ဒီဘာသာဖြင့် နှုတ်ဆက်ခြင်းကို “ မောနင်း ”ဟု ထုံးစံအတိုင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြုံးချိုစွာ ပြန်လည်နှုတ်ဆက်သည်။ သူမက ကာလကတ္တားဇာတိ ဘင်္ဂါလီအမျိုးသမီးဖြစ်သည်။ တိဘက်တက္ကသိုလ်တွင် အင်္ဂလိပ်စာဌာန တွဲဘက်ပါမောက္ခ အဖြစ်ထမ်းဆောင် နေသည်။ သူမ၏ အင်္ဂလိပ်အသံထွက်က ကုလားသံလုံးဝမ၀ဲ၊ ဘိုသံအစစ်ပေါက်အောင် သေချာလုပ်ပြောနေ သလားထင်ရအောင် ပြောတတ်သည်။
ထို့နောက် တက္ကသိုလ်မုခ်ဦးတွင် စောင့်နေကြသူများနှင့်အတူ မိဂဒါဝုန်မှ စုရပ်ဖြစ်သည့် ဗာရာဏသီမြို့ထဲရှိ ဆေးဝင်္ကဘာမြန်မာကျောင်းသို့ အော်တိုကားလေးတစ်စီးငှါးကာ ထွက်လာခဲ့ကြ၏။ ဆေးဝင်္ကဘာ မြန်မာကျောင်းတွင် နေ့ဆွမ်းစားကြသည်။ ဆွမ်းစားပြီးသည်နှင့် အသင့်ငှားထားသည့် ကားပေါ်တွင် တက်ရောက် နေရာယူကြသည်။ ကားကတော့ မြန်မာပြည်မှာ လူပြောအများဆုံးကား” အပြာရောင်” အဆင်းရှိသော သီးသန့်လူစီးယာဉ်ဖြစ်သည်။ (အမှန်တကယ်ပင် “ကားပြာလေး”နှင့် တူကြောင်း လမ်းတစ်လျှောက်ဂိတ်များတွင် ပို၍ ထင်ရှားသည်။ စစ်ဆေးရေးဂိတ်များက ကား၏ အမှတ်အသားတစ်ခုခုကို လိုက်ရှာကြခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။)
ပထမဆုံး ဗာရာဏသီသက္ကတတက္ကသိုလ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားဆောင်(International Hostel)သို့ ၀င်ကာ အဖွဲ့ရုံးချုပ်အတွက် ဒသမနှစ်လည်အထိမ်းအမှတ်စာစောင်များ ကားပေါ်တင်ကြသည်။ နေရာ အခက်အခဲကြောင့် အုပ်ရေနှစ်ရာတိတိသာသယ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဗာရာဏသီဟိန္ဒူ တက္ကသိုလ်ကြီးသို့ ၀င်ကာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားဆောင်(International Flat)မှ အဖွဲ့အမှုဆောင် ရဟန်းတော်များကို ကြိုကြ၏။
ဗာရာဏသီမှ လူစုံ၍ ကားစထွက်တော့ ၁၂း၃၀ ။ ထိုအချိန်မှာပင် တိဘက်တက္ကသိုလ်အဓိပတိရုံးခန်းမှ ဖုန်းဝင်လာသည်။ “ဘန္တေကြီး ခု ဘယ်မှာပါလဲ၊ အဓိပတိကြီးက ဘန္တေကြီးကို တွေ့ချင်နေပါတယ်”။ အကျိုးအကြောင်းရှင်းပြလိုက်ရသည်၊ "'Now I am on the way to Bodh Gaya''.
ဗာရာဏသီမှ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြမည့် ဗဟိုအမှုဆောင်များ၊ ကျောင်းနှင့် ပညာရေးကော်မတီဝင်များ
၁။ အရှင်ဓမ္မသီလာဘိဝံသ (ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ)
၆။ အရှင်ကောသလ္လ (စာရင်းစစ်)
၇။ ဒေါက်တာအရှင်စန္ဒိမာ(ကျောင်းတော်ကြီးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ)
ညနေ ၆း၀၀ နာရီခန့်တွင် ဗုဒ္ဓဂယာမြေမြတ်မဟာရှိ အဖွဲ့ပိုင်ကျောင်းတော်ကြီးသို့ ရောက်ရှိခဲ့လေသည်။ ဗုဒ္ဓဂယာသည် ဗာရာဏသီထက်ပို၍ ပူလောင်ဟန်ရှိပေ၏။ ညနက်သည်အထိ အိပ်မပျော်ကြ၊ ညနှစ်နာရီထိုး သွားမှ အိပ်ဖြစ်တော့သည်။
ကျောင်းတော်၏ နံနက်စာ ကြာဆံကြော်သည် မမေ့နိုင်ဖွယ်ရာဖြစ်၏။ နေ့လည်ပိုင်းအစည်းအဝေးအတွက် ဥက္ကဌဆရာတော်နှင့်အတူ အစီအစဉ်ရေးဆွဲကြသည်။ အဖွဲ့ကြီး၏ ညီညွတ်ခိုင်မာမှု၊ အဖွဲ့ဝင်ရဟန်းတော်များ၏ ချစ်ကြည်စည်းလုံးမှုနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောပညာရေးစီမံကိန်းများကို အထောက် အကူဖြစ်စေမည့် အချက်များကို အဓိကထားခဲ့ကြသည်။ နေ့လည်စာ ငါးကြော်နှင့် မန်းကျီးရွက်ချဉ် ရေဟင်းသည်လည်း ရာသီစာအစစ်ပင်ဖြစ်သည်။ မန်းကျီးရွက်ချဉ်ရေဟင်းကို ရှူးရှူးရှားရှား မှုတ်သောက်ကြ သည်။
နေ့လည် ၁၂း၀၀ နာရီတိတိတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာပညာသင်မြန်မာရဟန်းတော်များ သာယာဖွံဖြိုးရေး အဖွဲ့ကြီး၏ ဧကာဒသမနှစ်လည်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ပထမလေးလပတ်အစည်းအဝေး စတင်သည်။ ဗာရာဏသီဌာန၊ မဂဓဌာနနှင့် နာလန္ဒဌာနအသီးသီးရှိ ဗဟိုအမှုဆောင်များ၊ ကျောင်းတော်ကြီး ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ရေးကော်မတီဝင်များ၊ ပညာရေးကော်မတီဝင်များ စုံညီစွာတက်ရောက်ကြသည်။
သဘာပတိ အရှင်ပညာသာမိ( ဥက္ကဌ)
အခမ်းအနားမှူး အရှင်ဝိစိတ္တသာရ (အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး)
၁။ နမော တဿ သုံးကြိမ်ရွတ်ဆို၍ အစည်းအဝေးကို စတင်ဖွင့်လှစ်ရန်
၂။ အစည်းအဝေးသဘာပတိ အဖွဲ့ဥက္ကဌဆရာတော်မှ အဖွင့်အမှာစကားလျှောက်ထားရန်
၃။ ဗာရာဏသီဌာန၊ မဂဓဌာန နှင့် နာလန္ဒဌာန၊ ဌာနကြီးသုံးခု၏ ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများနှင့် ကျောင်းတော်ကြီးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ၏ ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများ တင်သွင်းဖတ်ကြားရန်
၄။ အဖွဲ့ကြီး၏ ပထမလေးလပတ်သက်တမ်းကာလအတွင်း ဌာနအသီးသီးတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ပညာရေးသင်တန်းများဆိုင်ရာအစီအရင်ခံစာနှင့် ပညာရေးကော်မတီဥပဒေမူကြမ်းတင်သွင်းခြင်း
၅။ အဖွဲ့ပိုင်ကျောင်းတော်ကြီးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ ဥပဒေမူကြမ်းတင်သွင်းရေးနှင့် အဖွဲ့ကြီး၏ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာမူသတ်မှတ်ရေးဆွေးနွေးကြရန်
၆။ အဖွဲကြီး၏ ပထမလေးလပတ်ကာလအတွင်း သာသနာရေးဆိုင်ရာ အထွေထွေလုပ်ငန်း ရပ်များဆောင်ရွက်ခဲ့မှုအခြေအနေများနှင့် ဒုတိယလေးလပတ်ကာလတွင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားကြမည့် သာသနာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးနှင့် အထွေထွေကဏ္ဍကို ဆွေးနွေးကြရန်
၇။ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံ တိဋ္ဌတု သုံးကြိမ်ရွတ်ဆို အစည်းအဝေးကို ရုပ်သိမ်းရန်
၁၂း၀၀ နာရီတွင် စတင်သော အစည်းအဝေးသည် ၀၂း၄၅ နာရီတွင် ပြီးဆုံးသည်။ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးငြင်းခုန်ခွင့်ရှိသော အစည်းအဝေးဖြစ်၍ အဖွဲ့ကြီးအတွက် အကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သော ဆွေးနွေးချက်များ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ အကြံပြုချက်များဖြင့် အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစွာ ရုပ်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။ (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအပြည့်အစုံကို အဖွဲ့ကြီး၏ ဧဟိ သွာဂတံ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မည်။ )
အစည်းအဝေးပြီး၍ ဌာနအသီးသီးစာရွက်စာတမ်းများ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပြီးသည်နှင့် အသင့်စောင့်နေသည့် ကားပြာလေးပေါ်တွင် တက်ရောက်နေရာယူကြသည်။ သို့သော် အပြန်ခရီးမှာတော့ လူမစုံတော့ပါ။ အမှုဆောင်ရဟန်းတော်အချို့က ရွှေပြည်ကြီးသို့ နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက် ခဏတာ ပြန်ကြမည်မို့ ဂယာမှာ နေခဲ့ကြသည်။ အားလုံးကို လက်အုပ်ချီကာ နှုတ်ဆက်။ ညီညွတ်ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်ကြစေသတည်း။ ဗာရာဏသီရောက်တော့ ည ၇း၄၅ မိနစ်ခန့်ရှိလေပြီ။
တိဘက်တက္ကသိုလ်သည် စနေနေ့တွင်လည်း ရုံးပိတ်ကျောင်းပိတ်သည်မဟုတ်။ နားရက်တစ်ရက်သာ ထားသည်။ ဆရာများ နားနေခန်း(Teacher's Common Room)တွင် လက်မှတ်ထိုးပြီးသည်နှင့် တက္ကသိုလ်အဓိပတိရုံးခန်းသို့ ရောက်သွားသည်၊ အဓိပတိ၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိက ညနေ ၃း၃၀ နာရီမှာ တွေ့ဆုံဖို့ ပြောသည်။ သို့နှင့် မစ္စတာပါရဂူ၏ မိဂဒါဝုန်အိမ်သစ်သို့ နေ့လည်စာစာရန် ရောက်သွားသည်။ မော်ဒန်တောရတွင် ဘာဟင်းမှ ချက်မထားပါ။ ခပ်တည်တည်ဧည့်သည်လုပ်ခြင်းသည် ပို၍ လုံခြုံလိမ့်မည်။ ကိုးန၀င်းကလည်း ဖိတ်ထားသေးသည်။ ကိုးန၀င်းက ဟင်းကောင်းချက်မည်ဟု သတင်းရပြီးသည့်တိုင် မစ္စတာပါရဂူ၏ မြန်မာ့ရိုးရာ ပဲပင်ပေါက်ဟင်းဆီ စိတ်ရောက်သွားသည်။
နေ့လည် ၃း၃၀ နာရီမှာတော့ တိဘက်တက္ကသိုလ်အဓိပတိရုံးခန်းသို့ရောက်သွားသည်။ ချိန်းဆိုထားသည့် နာရီအတိအကျတွင် အဓိပတိလားမားကြီးနှင့် တွေ့ဆုံစကားပြောရသည်။ အဓိပတိလားမားကြီးက ယဉ်ကျေးပျူငှာစွာ ကြိုဆိုသည်။ အချင်းချင်းလက်အုပ်ချီကာ အသိအမှတ်ပြုနှုတ်ဆက်ခြင်းကတော့ အသားကျနေခဲ့ပြီ။
အဓိပတိလားမားကြီးက သူဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ပါဠိအထူးသင်တန်းကို ဂုဏ်ပြုစကားပြောသည်။ သူ့သင်တန်းတက် ရောက်ခဲ့သူများထံမှ အဓိပတိက စုံစမ်းထားပြီးဖြစ်သည်။ ထို့နောက် နောက်နှစ်ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည့် ပညာသင်နှစ်တွင် ၀ိဇ္ဖာကြိုတန်း၊ ၀ိဇ္ဖာအောက်တန်းနှင့် ၀ိဇ္ဖာတန်းတို့ကို ဦးစီးသင်ကြားပေးရန်နှင့် ထိုအတန်းများတွင် သင်ကြားရန်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများရေးဆွဲပေးရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ယမန်နှစ်က ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော ပါဠိအထူးသင်တန်း (स्पेशल पली कुरसे) အပြင် တက္ကသိုလ်ဆရာဆရာမများနှင့် ၀န်ထမ်းများအတွက်ပါ တိုးချဲ့ သင်ကြားပေးစေ လိုကြောင်း တိုက်တွန်းပြန်ပါသည်။ နည်းနည်းတော့ ပုခုံးတွန့်သွား၏။ ဂျက်ကွမ်းခြံကုန်းကြီး၏ “ ငါကား ဖြစ်ချေပြီ” အချိုးမျိုးဖြစ်သွားမှာလည်း စိုးမိသေး၏။
ထိုမျှဖြင့် မပြီးသေးပါ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလတွင် တိဘက်တက္ကသိုလ်မှ ကြီးမှူးကျင်းပမည့် နိုင်ငံတကာဗုဒ္ဓ၀ိနည်းဆိုင်ရာညီလာခံကြီးတွင် တက်ရောက်ရန် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပါဠိပိဋကတ်ပညာရှင် ဆရာတော်ကြီးများပင့်ဆောင်ရေးအတွက် အမည်စာရင်းတင်သွင်းပေးရန်လည်း တိုက်တွန်းပြန်ပါသည်။ မဟာယာနထေရ၀ါဒရဟန်းတော်များ၏ ၀ိနည်းဓမ္မကံဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ပါတိမောက္ခ ကျင့်ဝတ်များအကြောင်းစာတမ်းများတင်သွင်းဖတ်ကြားမည့် ညီလာခံကြီးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရှေးရိုးစွဲ (Conservative) အမြင်မျိုးမရှိဘဲ လွတ်လပ်ပွင့်လင်းသောအမြင်ရှိသည့် အင်္ဂလိပ်စကားဖြင့်ပြောဆိုဆွေး နွေးနိုင်မည့် စီနီယာဆရာတော်ကြီးများနှင့် ဂျူနီယာရဟန်းတော်များ (၈)ပါးခန့်ကို ဖိတ်ကြားလိုပါကြောင်း ပြောပါသည်။
ယခင် (၂၄-၀၅-၂၀၁၀) က တက္ကသိုလ်အဓိပတိကို သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးအကြောင်း မိတ်ဆက်ပြောခဲ့ဖူးသည်ဖြစ်၍ သီတဂူဆရာတော်ကြီးကိုလည်း အထူးဖိတ်ကြားလိုကြောင်းလည်း ပြောဆိုသည်။ အဓိပတိလားမားကြီး၏ စကားအစဉ်တွင် မြန်မာရဟန်းတော်များ၏ ပါဠိပိဋကတ်အစဉ်အလာကို လေးစားကြောင်း ထပ်တလဲလဲ ပြသပါသည်။ ကောင်းလေစွ။
သို့နှင့် သည်ရက်ပိုင်းအတွင်း ဘလော့စာမျက်နှာတွင် အသံတိတ်သွားခဲ့ရပါကြောင်း။
Posted by ဓမ္မဂင်္ဂါ at 8:49 PM
အဲ သဘောကတော့ ဧဟိသွာဂတံမှာ ဆက်ရန်ကို ဖတ်ရမှာပေါ့နော်။ ကောင်းလေစွ။
Race, colour & creed make us who we are.
But love, respect & consideration for our fellow man make us what we are.
(MAH BOW TAN)